Kedu ihe m ga - eme ruo oge ntuli aka Brazil? - 1aviagem.com
Kedu ihe m ga - eme ruo oge ntuli aka Brazil?
Gara aga post: Kedu ka ọ dị ka nde mmadụ nọ? (Vietnam)
Nzipu ozo: Ajuju: Olee otu Canada? nke onye Canada
Edebere 23 October 2018 Nyocha 3 site Römulo Lucena
Agaghị m etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, kama dịka onye Brazil, enwere m ike ịme ya. Ma eleghị anya oge, ma n'oge na-adịghị anya.
Eji m 8 Atụmatụ maka onye nhoputa aka iji mechie ntuli aka. Mee ka ọ rụọ ọrụ!
1- Lelee ozi:
Iji malite mkparịta ụka ahụ, lelee ozi tupu ịkekọrịta. O nweghị uru ị ga-eji bụrụ onye na-agba ọsọ nke whatsapp ma ọ bụrụ na ị gaghị elele eziokwu nke ozi ahụ tupu oge eruo.
Ọ bụrụ na ị na-eji ozi adịgboroja (okwu a ghọrọ ọmarịcha ekele site na Donald Trump) mgbe ahụ, ị ​​bụ onye ụgha dika onye ị chọrọ ịwakpo.
2 Kwuo eziokwu.
Nke ahụ na-eme ka onye nyocha gị.
3- Kwụsị ịkatọ ndị Brazil.
Ntuli aka ndi a adighi nma. Ya mere ọ gwụla ma ị bụ onye na-akwado ihe omimi, (onye Russia, ya mere ị ga-agbapụ na Brazil) kwusi na-atụ egwu ndị omeiwu na-ekwu na ọ bụrụ na Fernando Haddad merie mmadụ nile, a ga-achụpụ ya. Ma ọ bụ ọbụna ma ọ bụrụ na Jair Bolsonaro merie onye ọ bụla ga-atụfu akpa ego ezinụlọ. Nke a bụ ụgha na abụọ.
4- Cheta urn anaghị enwe ọrụ njikwa maka votu gị.
N'adịghị ka smartphone gị, urn enweghị ike iji mezue votu gị. Ya mere, mara ihe ị na-eme. Buru nke a n'uche mgbe ị na-ahọrọ maka onyeisi oche. Mgbe ị pịa 1 ... nọmba nke ọzọ dị na ihe ize ndụ gị. Bụrụ Onye Nturu Aka Na-atụghị Anya Ya. Oh na mgbe ị ga-agbanye nkwenye.
5- Lee tupu onye onye osote onye gọọmenti gị!
Ị na-echeta nke ọma ihe mere na ntuli aka ikpeazụ? Mgbe ahụ, lee onye bụ Onye Nleta nke onye nyocha gị, chọpụta ndụ ya. N'ihi na mgbe tightening kwenyere na urn ọ na-enyere aka na akụkọ ihe mere eme na "na-efe." Ị ka nwere ụbọchị 5 maka nke a. Google na-enyekwa aka.
Mgbe ahụ, ọ baghị uru ịsị na ị tozuru oke na naanị nọrọ na ísì!
6 - Gụọ atụmatụ gọọmentị gị.
Amaara m, ha na-emezu kwa, ma cheta na afọ 4 maka iwu ka ụmụ okorobịa chọrọ (jupụta soseji) dee ọtụtụ ihe n'usoro ochichi ha. Ma ọgụgụ dị ezigbo mkpa.
Iji mee ka ndụ ha gbasoo atụmatụ abụọ nke gọọmenti na njikọ nke TSE:
Ihe ngosi gọọmentị Fernando Haddad: pịa ebe a ibudata
Mkpebi nke Gọọmentị Jair Bolsonaro: pịa ebe a ibudata
ma ọ bụ pịa n'okpuru ị ga-aga ozugbo na ibe TSE, ma ọ bụrụ na ọ megheghị na ekwentị gị http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos
7- Kwụsị ịsị na ọ bụrụ na ị ga-emeri, ị ga-ebi n'èzí Brazil.
N'ikwu eziokwu ahụ, anyị agbajiri mgbe nsogbu a dum gasịrị, anyị enweghị ego iji debe anyị, nke ga-asị na anyị bi n'èzí Brazil.
N'ọgwụgwụ nke ntuli aka ndị a, anyị niile ga-anọrịrị David Luiz mgbe e kpochara iko 2014. Anyị enweghị ike ịlaghachi n'ụlọ, ebe ọ bụ na anyị nọ n'ụlọ ma anyị ka nwere 7 × 1.
8 - Ekpochapu ọbụbụenyi n'ihi ntuli aka.
N'ichebara nhọrọ ndị anyị nwere maka onyeisi oche na ntuli aka ndị a, m nwere ike ịsị site n'ememe mbụ nke president nke Republic:
"Echeghị m na onye ọ bụla nke meriri ma ọ bụ tụfuo ga-emeri ma ọ bụ nwụọ. Onye ọ bụla ga-atụfu. "(Rousseff, Dilma)
Buru nke a n'uche na ezi ntuli aka.
Mụtakwuo banyere blog site na ịpị na eserese dị n'okpuru.
Ruo ụbọchị 28 / 10 / 2018 bụ ụbọchị nke ntuli aka.
Olee otú 2018 28 / 10 / 2018 enyi Bolsonaro Brasil ndị Brazil david luiz Dilma Donald opi Nhọrọ ndi ntuli aka Fernando Haddad jaia ebi n'èzí atụmatụ ochichi president smartphone onye na-akwado ihe omimi tse eziokwu osote votu
3 comments	Hapụ okwu >
24 October 2018 ka 01: 28
Hụrụ ozi ahụ n'anya, ihe ọmụma na-atọ ụtọ! Daalụ !!!
24 October 2018 ka 07: 38
Ana m ekele gị. (I.e.
25 October 2018 ka 12: 11
Hi, Eliane, ekele gi. Olileanya na ndị mmadụ ga-ahụ ndụmọdụ ndị a tupu ịtụ ntuli aka. Daalụ.